Nisy ireo hetsika maro isan-karazany nandravahana ity fankalazana ity, toy ny hazakazaka am-pirahalahina, ny fotoam-pivavahana, ny fampisehoana ireo asa fampandriana fahalemana ataon’ireo mpilatsaka an’elon’aina, ny fifandimbiasam-pitenenana ary ny fampiratiana.
Nandritra ny fandraisam-pitenenany dia nankasitraka ny ezaka vitan’ny eo anivon’ny Tafika Malagasy ny Praiminisitra. “Nahitana taratra ny fivoaran’ny Tafika Malagasy ny hetsika natao androany, fanamby apetraky ny fitondram-panjakana, eo ambany fitarihan’ny Filohan’ny Repoblika ny fanovàna ny hendriky ny Tafika Malagasy amin’izao fotoana izao” hoy izy.
Mba ahatongavana amin’ireo tanjona tiana apetraka anefa dia lalantsaina efatra no mibaiko izany fanovàna izany hoy hatrany ny Praiminisitra, misy ihany koa ny fampitaovana ireo mpitandro ny filaminana ho fametrahana ny fandriampahalemana katsahina.
Ny lalantsaina voalohany dia ny fametrahana Tafika sy Foloalindahy miaro ny fiandrianam-pirenena izay maha iray tsy vaky an’i Madagasikara. Manarak’izay dia ny fiarovana ny Vahoaka sy ny fananany, izay miankina amin’ny fametrahana rindran-damina sy fanavaozana ny rafitry ny Tafika mifanaraka amin’ny fanamby sy ny filàn’ny firenena misy amin’izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fiarovana ny harem-pirenena, izay misandrahaka amin’ny zavatra maro, toy ny fiarovana ny fari-dranomasina, ny sisin-dranomasina, ary ny fananana anatiny.
Nohamafisin’ny Praiminisitra fa “raha tsy voaaro ny fananam-pirenena dia tsy afaka ny handroso ny firenena, raha tsy haintsika ny mikajy ny fananantsika dia hahantra foana ny firenena”.
Ary farany dia ny fametrahana fa akaiky ny vahoaka ny Tafika, ka manana adidy sy andraikitra manoloana ireo loza sy ireo tandindon-doza maro isan-karazany miseho, na lalovan’ny firenena toy ny rivodoza, ny fotoam-pahavaratra izay miteraka ranobe, ny doro tanety, sy ireo maro tsy voatanisa, ary ankehitriny dia mbola miaina ao anatin’ny valan’aretina isika ka mila izany tan-tsoroka izany.